Nagu saabsan - Staba Electric Co., Ltd.
Laga soo bilaabo 2017, Staba wuxuu bilaabay inuu sameeyo cilmi baaris iyo horumarin ku saabsan alaabada xeedho ee PD GaN.
Teknolojiyada GaN waa kacaanka warshadaha xeedho, xeedho-bixiyehani wuxuu adeegsan karaa tarjumaad yar iyo waxyaabo kale oo isdaba-joog ah, taas oo si wax ku ool ah u yareynaysa cabbirka GaN iyo soosaarka kuleylka, iyo hagaajinta waxtarka.
Dhanka kale sii wad soo bandhigida qalabka wax soo saarka otomaatiga ah sanadihii la soo dhaafay, ma ahan oo kaliya yareeynta qiimaha shaqaalaha, kordhinta wax soo saarka, laakiin sidoo kale kor u qaadida qiimaha xeedho darbi Staba PD, iyo hagaajinta tayada heer sare ee tikniyoolajiyadda otomaatiga; soo bandhigida nidaamka tijaabinta otomaatiga ah ee ugu dambeeya iyo nidaamka gabowga, hoos u dhig qiimaha qarashka shaqaalaha isla mar ahaantaana, hagaajiya tayada xeedho PD USB heer caalami ah, heerka soosaarida cillad soosaarka ay gaarto PPM.
Intii lagu gudajiray horumarinta, Staba waxay ahmiyad gaar ah siineysaa isu-ururinta xuquuqda lahaanshaha aqooneed iyo sameynta nidaamka maamulka shirkadaha. Staba waa shirkaddii ugu horreysay ee gobolkeenna ka gudubta aqoonsiga IPMS-ka ee GB / T29490-2013, iyadoo leh 4 shatiyada asalka ah ee Mareykanka iyo Midowga Yurub, iyo in ka badan 58 asalka shatiyada abuurka Shiinaha iyo nooca shatiyada adeegga.
Staba waxaa loo ansixiyay / loo-ansixiyay inay tahay shirkad farsamo heer qaran ah seddex jeer oo isku xigta ， waxaan leenahay labo xarumood oo teknolojiyad shirkadeed: Xarunta Guangdong ee Xarunta Teknolojiyada Awoodda Cilmiga leh, iyo Xarunta Teknolojiyada Waxsoosaarka Power City Zhongshan. Laga soo bilaabo maalintii ugu horreysay ee aasaaskeeda, nidaamka softiweerka ERP iyo nidaamka maaraynta ee ISO9001 ayaa laga hirgeliyay dhinac kasta oo ka mid ah maareynta shirkadda, iyadoo la hubinayo habsami u socodka iyo hufnaanta nidaamka. Waqtigan xaadirka ah waxaan haynaa 340 shaqaale, kuwaas oo 33 ka mid ah loogu talagalay nidaamka R & D halka 38 ay u shaqeeyaan nidaamka maamulka shirkadaha. Isla mar ahaantaana, waxaan leenahay wadashaqeyn xoog leh iyo iskaashi wadatashi oo lala yeesho machadyo badan oo cilmi baaris ah iyo khubaro ku takhasusay warshadaha, iskuna dayaya in alaabteenna, adeegyadeena iyo tikniyoolajiyaddeenna ay ka dhigaan safka hore ee warshadaha.
Staba waxay jeclaan laheyd inay abuurto qiime guul-wadaag ah oo ay weheliso macaamiisha tayo sare, sicir tartan, jawaab celin deg deg ah hogaaminta waqtiga iyo taageerada.
Waxtarka Faa'iidada ugu badan ama qaabka badbaadada adduunka
Hal-abuurnimo Nuxurka hal-abuurnimadu waa walaaca aadanaha iyo qanacsanaanta macaamiisha
Macaamiisha Koowaad Mahadnaq qalbiga ayaa ugu muhiimsan, Kobocayagu waa mid aan kala sooci karin macaamiisha